Scolari oo sheegay in ciyaaryahan Neymar uu dhowr sanno ka hor ku biiri rabay Barca
Home Sports Scolari oo sheegay in ciyaaryahan Neymar uu dhowr sanno ka hor ku...
Tababaraha kooxda qaranka Brazil Luiz Felipe Scolari ayaa sheegay xidigga Neymar uu ku biiri lahaa kooxda Spain Barcelona labo sanno ka hor, laakin buu yiri waxaa uu ka door biday in iska joogo kooxdiisa Santos.
21-jirkan ayaa dhowr jeer lala xiriiriyay kooxaha Barca, Real Madrid iyo Bayern Munich, laakin waxaa hubanti noqotay in uu iska joogo kooxda Santos illaa sannadka 2014-ka oo dalkiisa uu martigalinaayo kolkaas tartanka kubadda cagta adduunka.
Scolari, oo markii labaad noqday macalinka kooxda Brazil tan iyo bishii November, ayaa sheegay in xidiggan da’da yer in uu iska joojiyay u baqoolida Yurub isagoo ka door biday in uu waddankiisa iska joogo.
“Neymar labo sanno ka hor ayuu damcay in uu aado kooxda Barca, laakin waxa uga wanaagsanaatay in uu la joogo Santos,” ayuu yiri Scolari.
Wuu sii hadalay “Wuxuu ka mid yahay xidiggaha kooxda Brazil u ciyaaraya koobka adduunka sannadka 2014-ka, marka wuu ku saxan yahay in uu doorbido halka in uu joogo .”
Neymar wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda durba loo magacaabay in dalkooda ay u matalaan koobka adduunka oo sannadka soo socda dhacaya.
Waxaa ku wehliya Kaka, Dante, Dani Alves iyo Lucas Moura , sidaas waxaa yiri.
Macalin Scolari ayaa sheegay in xidiggahan ay ka mid yihiin kuwa loogu talagalay ciyaaraha saaxibtinimo ay la yeelanayaan waddamada Italy iyo Russia dhammaadka bishan.